Akwụkwọ: Fastdị Ọsọ, Nzuzo, na Customizable Online | Martech Zone
Akwụkwọ ederede na-enyere onye ọ bụla aka ịmepụta ụdị ntanetị ma ọ bụ ibe ngwaahịa ngwa ngwa, na-enweghị nghọta, na ịkọwapụta ha dịka ọ masịrị ha - ha niile na-enweghị koodu ederede. Formsdị gị dị mfe maka ndị ahịa na obodo gị iji mezue na ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ ebe ọ bụ na ha na-anabata azịza.
Akwụkwọ na-agụnye ike ibipụta ụdị na-akparaghị ókè, na-enye gị ohere itinye ha na saịtị gị, na-enyere gị aka ijikọ Stripe maka ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ tinye data gị site na Zapier. Nwere ike ịhọrọ ụdị gị site na ndebiri ahazi ma ọ bụ wulite nke gị:
Ihe ngwugwu ndebanye aha gị na-emetụta ọnụọgụ nke saịtị ị nwere ike ịbanye na ya, ọnụọgụ nke nnyefe a na-ahapụ gị, ọnụ ọgụgụ nke echiche a na-ahapụ gị, ohere ekenyere maka ntinye faịlụ, yana ma enwere ego azụmahịa na Stripe .
Tags: collectionụdị kọntaktịnchịkọta dataformsonline ụdịụdị dị n'ịntanetịmpempe akwụkwọndebanyestraipuike